1 VaKorinde 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 VaKorinde 9:1-27
9 Handina kusununguka here?+ Handisi muapostora here?+ Handina kuona Jesu Ishe wedu here?+ Imi hamusi basa rangu munaShe here? 2 Kana ndisiri muapostora kune vamwe, chokwadi ndiri muapostora kwamuri, nokuti muri chisimbiso chinosimbisa+ kuva kwangu muapostora pamusoro paShe. 3 Kuzvidzivirira kwangu kune vaya vanondiongorora kwakaita sezvinotevera:+ 4 Hatina kodzero yokudya+ nokunwa here? 5 Hatina kodzero yokufamba nehanzvadzi somudzimai here,+ sezvinoita vamwe vaapostora vose nevanun’una vaShe+ naKefasi?+ 6 Kana kuti ndiBhanabhasi+ neni chete tisina kodzero yokurega basa rokunyika here?+ 7 Ndiani anomboshanda somurwi achizvibhadharira zvaanoda? Ndiani anodyara munda wemizambiringa akasadya zvibereko zvawo?+ Kana kuti ndiani anofudza boka rezvipfuwo akasadyawo mumwe mukaka weboka racho rezvipfuwo?+ 8 Ndiri kutaura zvinhu izvi nemaonero evanhu here?+ Kana kuti Mutemo+ hautauriwo zvinhu izvi here? 9 Nokuti mumutemo waMosesi makanyorwa kuti: “Usasunga muromo wenzombe painenge ichipura zviyo.”+ Ko Mwari ari kuva nehanya nenzombe here? 10 Kana kuti anozvitaurira isu chete? Chokwadi zvakanyorerwa isu,+ nokuti munhu anorima anofanira kurima aine tariro uye munhu anopura anofanira kudaro aine tariro yokuzodyawo.+ 11 Kana takadyara zvinhu zvomudzimu+ kwamuri, chinhu chikuru here kana tikazokohwa zvinhu zvenyama kwamuri?+ 12 Kana vamwe vanhu vachiva nekodzero iyi pamuri,+ hatidarowo zvikuru here? Kunyange zvakadaro, hatina kushandisa kodzero iyi,+ asi tiri kutsungirira zvinhu zvose, kuti tirege kumbovhiringidza mashoko akanaka+ pamusoro paKristu. 13 Hamuzivi here kuti vanhu vanoita mabasa matsvene vanodya+ zvinhu zvepatemberi, uye vaya vanoshumira nguva dzose+ paatari vanogovana neatari? 14 Saizvozvowo, Ishe akarayira+ vaya vanozivisa mashoko akanaka kuti vararame nemashoko akanaka.+ 15 Asi handina kushandisa kana imwe chete yegadziriro idzi.+ Chokwadi, handina kunyora zvinhu izvi kuti zvive zvakadaro kwandiri, nokuti zvaizova zvakanaka kwazvo kuti ndife—hapana munhu achaita kuti chikonzero changu chokuzvirumbidza+ chive chisina zvachinobatsira! 16 Zvino, kana ndiri kuzivisa mashoko akanaka,+ hachisi chikonzero chokuti ndizvirumbidze, nokuti ndinofanira+ kuzviita. Chokwadi, ndine nhamo+ kana ndikasazivisa mashoko akanaka! 17 Kana ndichiita izvi nokuzvidira,+ ndine mubayiro;+ asi kana ndikazviita zvichipesana nezvandinoda, kunyange zvakadaro ndine utariri+ hwandakaronzeswa. 18 Saka, mubayiro wangu chii? Kuti pandinenge ndichizivisa mashoko akanaka ndigovere mashoko akanaka pasina mutengo,+ kuti ndirege kushandisa kodzero yangu ine chokuita nemashoko akanaka zvisina kukodzera. 19 Kunyange zvazvo ndakasununguka kuvanhu vose, ndakazviita muranda+ kuna vose, kuti ndiwane+ vanhu vazhinji kwazvo. 20 Naizvozvo kuvaJudha ndakava somuJudha,+ kuti ndiwane vaJudha; kune vaya vari pasi pomutemo ndakava somunhu ari pasi pomutemo,+ kunyange ini ndisiri pasi pomutemo,+ kuti ndiwane vaya vari pasi pomutemo. 21 Kune vaya vasina mutemo+ ndakava somunhu asina mutemo,+ kunyange zvazvo ndisiri munhu asina mutemo kuna Mwari asi ari pasi pomutemo+ kuna Kristu,+ kuti ndiwane vaya vasina mutemo. 22 Kune vasina simba ndakava munhu asina simba, kuti ndiwane vasina simba.+ Ndakava zvinhu zvose kuvanhu vemarudzi ose,+ kuti ndiponese vamwe nenzira dzose. 23 Asi ndinoita zvinhu zvose nokuda kwemashoko akanaka, kuti ndiagoverane+ navo. 24 Hamuzivi here kuti vanomhanya+ munhangemutange vanomhanya vose, asi mumwe chete ndiye anogamuchira mubayiro?+ Mhanyai+ saizvozvo kuti muuwane.+ 25 Zvakare, munhu wose anopinda mumakundano anozvidzora+ muzvinhu zvose. Zvino ivo, chokwadi, vanozviita kuti vawane korona inoora,+ asi isu isingaori.+ 26 Naizvozvo, mamhanyiro+ andiri kuita haasi asina chokwadi; makandiro andiri kuita zvibhakera ndeokuti ndisarova mhepo;+ 27 asi ndinorwadzisa muviri+ wangu ndichiuita somuranda, kuti zvimwe, pashure pokunge ndaparidzira vamwe, ini ndirege kuva asingatenderwi.+
1 VaKorinde 9